गायक नवीन भट्टराई, ७ वर्षीय छोरा दुवै चंगामा आशक्त (भिडिओ) :: निशा भण्डारी :: Setopati
विवेक राई काठमाडौं, कात्तिक ४
गत साता गायक नवीन के. भट्टराईको घर पुग्दा उनी छतमा चंगा उडाउन तरखर गर्दै थिए। सँगै थिए उनका ७ वर्षीय छोरा।
हातमा लट्टाइ बोकेका बाबुछोरा चंगा कतातिर उड्छ भनेर हावाको वेग पहिल्याउँदै थिए। आकाश मज्जाले खुलेको त थियो, हावाको वेग भने सुस्त। चंगा उडाउन माहिर नवीनलाई त्यो कुराको के मतलब!
उनले चंगालाई आकाशमा फनफनी नचाउन थाले। चंगा नाचिरहँदा छेउमा उभिएका छोरा रोमाञ्चित हुन्थे। एकैछिन पछि छोराले बुवाको हातबाट लट्टाइ खोसे र आफैं चंगा नियन्त्रण गर्न थाले। उनी पनि चंगा उडाउन बुवाजत्तिकै माहिर रहेछन्।
छोराको सीप देखेर मुस्कुराउँदै नवीनले भने, 'उसलाई पनि एकदम रूचि छ। त्यसैले पनि छिटो सिकिराछ।'
यसरी चंगा उडाउने सीप पुस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्व महशुस हुने उनले सुनाए। आफूले पनि छोराकै उमेरबाट चंगा उडाउन थालेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं डिल्लीबजारमा जन्मे पनि उनको धेरै बसाइ बानेश्वर मामाघरमा हुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि नै दसैं आउनसाथ उनलाई नयाँ लुगाभन्दा चंगा किन्ने ध्याउन्न हुन्थ्यो।
'अरू कुराको वास्ता नहुने बरू, हजुरबुवा-हजुरआमासँग रुवाबासी गरेर चंगा किनिमाग्थेँ,' उनले सम्झिए।
नयाँ चंगा पाउनसाथ उनी छतमा उक्लेर उडाउन थालिहाल्थे। छतमा उडाउन मज्जा नलागे साथीहरूसँग हुल बाँधेर गौचरणतिर लाग्थे। चंगा चेट गर्दाको क्षण सबैभन्दा रमाइलो हुने भन्दै उनले भने, 'चंगा चेट गर्न पाउँदा सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ। अरूको वा आफ्नो काट्टिए पनि त्यो क्षण चाहिँ मज्जा आउँछ।'
चंगा चेट भएपछि लुट्ने चलन भएको उनले बताए। लुट्ने अर्थात चेट भएर झरेको चंगा जसले सक्छ त्यसले समात्ने। अहिले पनि चंगा लुटेको क्षण सम्झिँदा पुरानै दिनमा पुगेको भान हुन्छ उनलाई।
अचेल चंगा उडाउने चलन हराउँदै गएकोमा खल्लो महशुस गर्छन् उनी। त्यो बेला हरेक घरको छतमा कम्तीमा दुई जना चंगा उडाइरहेका हुने उनको अनुभव छ।
नोस्टाल्जिक हुँदै भन्छन्, 'पहिले त आकाश चंगाले रंगिन्थ्यो। प्रत्येक घरको छतमा दुई-तीन जना चंगा उडाइरहेका हुन्थे। अहिले आकाश खाली हुन्छ।'
नभन्दै त्यो दिन पनि आकाशमा उनको एक्लो चंगा बेसुरमा घुमिरहेको थियो। सायद चंगाले पहिलेपहिले भेटिने रंगिबिरंगी चंगा मिस गरिरहेको थियो!
अहिलेका बच्चाहरूमा पनि आफ्नो पालाजस्तो चंगा उडाउन, बाहिर खेल्न, डुल्न मोह नभएको उनी बताउँछन्। छतमा बच्चाहरूले चंगा उडाएको दृश्य निकै कम देखिने भन्दै उनले भने, 'अचेल केटाकेटी फेसबुक, युट्युबमा रमाइरहेका हुन्छन्। पब्जी खेलिरहेका हुन्छन्। छतमा बसेर घाम खाँदै चंगा उडाएको दृश्य कहाँ देख्न पाउनु?'
नवीनमा भने उमेरले चार दशक काटिसक्दा पनि चंगा मोह घटेको छैन। हरेक दसैंमा नयाँ चंगा ल्याएर उडाउन थालिहाल्छन्। अहिलेको पुस्तामा चंगा उडाउने चलन हराउँदै गएकाले पनि छोरालाई बेलेमै सिकाएका छन्।
चंगा बनाउन भने उनलाई आउँदैन। आफूले बनाउँदा राम्रो उड्दैन रे। अहिले पनि चंगा किन्न उनी आफैं पसल पुग्छन्। पहिलेपहिले डिल्लीबजारका सबै पसलमा पाइए पनि अहिले असन वा मैतिदेवी नै पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
एक मोहरको चंगा उडाएको सम्झिँदै भने, 'सानो चंगा एक मोहर र ठूलो २ रुपैयाँमा आउँथ्यो। अहिले २५ रुपैयाँदेखि माथि पर्छ।'
उनी जबजब चंगा उडाउन थाल्छन् तबतब बाल्यकाल सम्झिन्छन्। कहिलेकाही उडाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्छन्। र भिडिओमा बालापनका साथीले कमेन्ट भन्दै उनले भने, 'भिडिओ हेरेर साथीहरूले पहिलाको याद मिस गरे भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्दा आफू पनि त्यही समयमा पुगिनेरैछ।'
चंगासँग यति मोह भएकाले नै संगीतपछि आफूलाई मनपर्ने कुरा नै चंगा उडाउन रहेको उनी बताउँछन्। त्यसैले विदेश वा स्वदेशभित्रै पनि काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम नपर्दासम्म हरेक दसैंमा उनी चंगा उडाउन छुटाउँदैनन्।
यस वर्ष भने कोरोनाका कारण दसैंमा बुक भएका कार्यक्रम स्थगित भए। यसले आर्थिक नोक्सान परे पनि चंगा उडाउने समय प्रशस्त पाएको उनी बताउँछन्।
'कोभिडका कारण सबै कार्यक्रम रोकिएको छ। अनि यो बेला के गर्ने भन्दा त चंगा उडाउने हो,' उनले भने।
उनलाई कहिलेसम्म चंगा उडाउने भन्ने थाहा छैन। चंगाको मोह उनीबाट हराउन सकेको छैन। भन्छन्, 'समय मिल्यो भने यसरी नै उडाइरहन्छु होला।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०८:११:००